Rivotra Madio Ho an’i Ginea-Bisao: Firenena Iray Miandrandra Fiadanana · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraAsociación Extremeña de Comunicación Social - AECOS
Voadika ny 27 Oktobra 2013 12:45 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, Italiano, עברית, Français, اردو, Español
Ity lahatsoratra ity, izay nosoratan'i Silvia Arjona Martín, dia navoaka voalohany indrindra tao amin'ny vohikalan'ny AECOS teo ambanin'ny lohateny “Fresh Air for Guinea-Bissau” [es] (Rivotra Madio Ho an'i Ginea-Bisao) ny 26 Aogositra 2013.
Ny fahafahana voafetra ananan'i Ginea-Bisao hanome ho an'ny vahoakany, noho ny fizoran'ny firenena anatinà tetezamita ara-politika taorian'ilay fanonganam-panjakana farany niseho ny 12 Aprily 2012, dia mahatonga ny andavanandrom-piainana ho mahasorena sy sarotra ho an'ny ankamaroan'ny vahoakany izay miisa 1.6 tapitrisa.
Tsy mahafinaritra, mahonena sady mahaontsa ny fahitana fa hankalaza ny faha-40 taonan'ny fahaleovantena isika nefa miaina anatinà firenena iray tsy ahafahantsika manonofy akory!
Tsy moramora ny miaina anatinà firenena izay tsy ampy lalandava ireo tolotra fototra ilaina tahàka ny jiro sy ny rano fisotro any an-tranon'ny vahoaka. Hita taratra eny rehetra eny izany: trano fitsaboana tsy misy mpiasa sy fitaovana ara-teknika ilaina, toeram-pianarana tsy manana mpanabe voaofana tsara, tsy fahampian'ny sakafo any amin'ireo faritra ambanivolo kokoa, fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy, fampitahorana sy tsy fahampian'ny fahalalahana miteny, kolikoly, fanodinkodinana zava-mahadomelina, tsy fisian'ny foto-drafitrasa fifandraisana, sns.
Mametraka an'i Ginea-Bisao, firenena kely eo anelanelan'i Senegaly sy Ginea Conakry, ho eo amin'ny laharana 176 amin'ireo firenena 186 ny Fandaharan'asa Fampivoaran'ny Firenena Mikambana (PNUD). Raha ampiantsika anatin'izany fa ny tombatombam-pahavelomana dia 48 taona, ny harinkarena faobe eo amin'ny firenena dia 1.042 dolara isaky ny olona (dolara iraisam-pirenena tsy miova hatramin'ny 2005 ), ary 88 isanjato ny fanajanonana ny fianarana any amin'ny garabola, anivon'ireo salanisa hafa, dia afaka mandray an-tsaina kely ny fepetram-pahavelomana omen'ny firenena isika.
Any Bisao renivohitra, tsy dia hita faritra loatra ireo fepetra ireo, raha tsy mijery ny kiloadoaka amin'ny làlana, ny arabe maloto, ny fako mivangongo isaky ny fiolanana – tafiditra amin'izany ny manodidina ny Lapam-panjakana – sy ny haizina mandrakotra tanteraka ny tanàna vantany vao mody ny masoandro.
Hita kokoa izany any amin'ireo faritra ambanivohitra, izay mafy kokoa ny tsy fahampiana sy ny fitomboan'ny fahasahiranana ara-bola eo amin'ny fividianan-tsakafo, ambonin'izany rehetra izany ny fitotonganan'ny sandan'ny famokarana voanà mahabibo, izay loharanom-bola lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Iray amin'ireo arabe ao afovoan'ny renivohitra, Bisao. Sary an'i Silvia Arjona
Araka ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana Misahana Ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO), misedra tsy fahampian-tsakafo goavana i Ginea-Bisao amin'izao fotoana, izay mety hiantraika aminà vahoaka miisa 260.000 ao anatin'ny firenena, vokatry ny famokarana marefon'ny fambolena sy ny tsy fahamarinan-toeran'ny politika misy ao amin'ny firenena.
Mety ho izany no antony mahatonga an'i Fernando Delfín da Silva, Minisitry ny Raharaham-bahiny, ny Fifanarahana ary ireo Vondrom-piarahamonina ao anatin'ny governemanta tetezamita misy amin'izao fotoana, hihevitra ny fiantohana ny fiarovana ara-tsakafo ho laharam-pahamehana politika. Avy any amin'ny birao lehibeny any amin'ny Lapan'ny Governemantan'i Bisao, nanazava tamin'ahiahy ny zava-mitranga i Da Silva, izay miantso amin'ny fomba tsy mivantana ny fianakaviambe iraisam-pirenena:
Hatramin'ny nanombohantsika namokatra voanà mahabibo, taona maro lasa izay, nanakalo voanà mahabibo ho vary ny vahoaka. Tamin'izany fomba izany, mitovy amin'ny vary iray kilao ny voanà mahabibo iray kilao. Ankehitriny, anefa, raha manana vary iray kilao ianao dia afaka mividy voanà mahabibo telo kilao, izay midika fa nisy fihenany ny taham-pifanakalozana, olana iray goavana ilàntsika fanampiana.
Iray amin'ireo antony lehibe indrindra mahatonga ny fivoarana voafetran'i Ginea-Bisao ny tsy fahampian'ireo orinasa manodina, tsy ny voanà mahabibo ihany, izay maherin'ny 200.000 taonina no ahondrana isan-taona, fa ireo hafa vokarin'ny firenena ihany koa. Manipika i Da Silva fa mivoatra io antony io:
Tsy maintsy manodina ireo vokatra ara-pambolentsika isika. Raha tsy izany, tsy hanana arabe tsara, sekoly tsara, toeram-pitsaboana tsara na koa fotodrafitrasa tsara. Tsy maintsy ovaina haingana sy amboarina ny lamina ara-toekarena, satria ilay ananantsika amin'izao fotoana tsy miady amin'ny fahantrana fa mamorona aza. Ary tsy dia sarotra loatra izany. Raha manova izany isika, hanena be ny fahantrany i Ginea-Bisao ao anatin'ny efatra na dimy taona ary hamorona eo amin'ny asa 20.000 eo ho eo. Ary dia tsy ampiasàna teknolojia lavorary na sarotra ampiasaina izany rehetra izany!
Resy lahatra izy fa io no fiovàna tsy maintsy hizoran'ny firenena raha te-hahatratra fivoarana eo amin'y maha-olona, ara-toekarena ary sosialy avo kokoa, izay hanome hatsaram-piainana tsara kokoa ho an'ny mponiny.
Anatin'ny tapany faharoa amin'ity lahatsoratra ity, hahafantatra momba ny fijerin'ny fikambanan'ny tanora “Hetsika Iraisan'ny vahoaka” isika, izay noforonina tamin'ny herintaona mba hanomezana vahaolana manoloana ny hatezeram-bahoaka.